Dugsiyada sare | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Barashada bulshada / Buuga "Om Sverige" / Sida qoys loo dhisto iyo sida carruur dalka Iswiidhan loogu korsado / Dugsiyada sare
Marka ee ardayda dhigtaan fasalka ugu danbeeyo ee dugsiga hoose-dhexe ayee codsan karaan dugsiga sare. Dhigashada dugsiga sare ma ahan mid qasab ah. Sido kalena waa lacag la'aan. Dhallinyarada da’dooda u dhaxaysa 16 iyo 20 sano waxay dhigan karaan dugsiga sare haddii ay oo dhamaysteen dhigashada dugsiga hoose-dhexe. Qiyaastii dhalinyarada dhammaantood waxeey doortaan in usii gudbaan waxbarashada dugsiga sare.
Dugsiga sarena waxuu lee yahay qorsho-waxbarasho iyo qorsho-koorso ee soo saartay Hey'adda waxbarashada. Qorshaha-koorsada waxaa ku qoran waxa uu ardayga aqoon uu yelnaayo marka uu dhameeyo. Nidaamka-shahaadada dugsiga sare waxuu la mid yahay midka dugsiga hoose.
Arydayga ayaa doorto dugsiga sare iyo barnaamijka uu dhiganaayo. Codsiga marka uu sameeynaayo ardayga waa in uu ku qoraa dugsiyaal iyo barnaamijyo badan. Hubaal ma ahan in uu boos ka helo dugsiga uu koobaad ka dhigtay.
Barnaamijyo badan oo la raadsan karo ayaa jiro. Dugsi hoose-dhexe waxaa joogo shaqaale jiheeyo ardayga oo ku caawo isla markaana talo siiyo.
Dugsiga sare waxaa ardayda lagu bara aqoonta ay u baahan yihiin sida waxbarashada ugu sii wataan, sida jaamacad ama machad farsameed.
Si aad u akhrisatid barnaamij waxbarasho dugsi sare ah oo kuwa waddanka o dhan camal ah waa in ardayga uu ku baasaa maadada iswiidhishka, xisaabta iyo af-ingiriiska uu kusoo dhigtay dugsiga hoose-dhexe.
Si uu bilaabo barnaamijka xirfada waa in uu ardayga ku guuleeystay ugu yaraan shan maado.
Si uu bilaabo barnaamijka diyaarinta jaamcadaha, waa in uu ardayga ku guuleeystay ugu yaraan shan maado.
Ardayga aan ku guuleeysan maadooyinka waxeey dhigan karaan barnaamijka gogoldhigga. Barnaamijka gogoldhigga wuxuu ardayga ka caawini doonaa si uu waxbarashada ugu sii gudbo. Barnaamijka gogoldhigga waxuu uu kala baxa shan qeeyb oo kala duwan. Mid ka mid ah barnaamijyadaan waa barnaamijka gogoldhiga-luuqada oo si gaar ah loogu tala galay dhalinyarada ku cusub dalka. Waxeey dhalinyarda barnaamijkaas ku dhigtaan iswiidhishka ayagoo isla markaas dhiganaayo maadooyin kale. La xariir degmadaada si aad ula socotid fursada laga heli karo goobta aad degantahay.
In dheeraad ah oo ku saabsan barnaamijyada iyo soo galida dugsiga sare ka akhriso bogga internetka www.utbildningsinfo.se